Nansi Yonke Imininingwane Indlela Yokulungisa Iphutha 0x0 0x0? [Ikhodi Yephutha Ye-Windows Ixazululiwe] - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Nansi Yonke Imininingwane Indlela Yokulungisa Iphutha 0x0 0x0? [Ikhodi Yephutha Ye-Windows Ixazululiwe]
Ingabe nawe ubhekene nezinkinga ngamafasitela akho? Ingabe uthola iphutha 0x0 0x0 kaningi? Uma nawe ubhekene nenkinga efanayo usendaweni efanele. Lapha uzofunda ukuthi ungaluxazulula kanjani lolu daba emizuzwini embalwa. Kulesi sihloko, uzofunda ngencazelo yangempela... Funda kabanzi
Ingabe nawe ubhekene nezinkinga ngamafasitela akho? Ingabe uthola iphutha 0x0 0x0 kaningi? Uma nawe ubhekene nenkinga efanayo usendaweni efanele. Lapha uzofunda ukuthi ungaluxazulula kanjani lolu daba emizuzwini embalwa.
Kulesi sihloko, uzofunda mayelana nencazelo yangempela yephutha 0x0 0x0, ukuthi kwenzekani kudivayisi yakho nokuthi ulilungisa kanjani Iphutha 0x0 0x0. Leli phutha alibangelwa ngenxa yesizathu esisodwa kukhona izizathu ezimbalwa. Ezinye izibonelo ezijwayelekile izilungiselelo zesistimu ezingalungile, okufakiwe okungalungile kudivayisi yakho, nokunye okuningi. Kulesi simo, udinga ngokuphuthumayo ukulungisa leli phutha ngokusebenzisa isofthiwe ekhethekile futhi le software izokusiza ekulungiseni uhlelo lwakho. Futhi idivayisi yakho izosebenza kahle.
Incazelo Yephutha 0x0 0x0
Ikhodi yephutha engu-0x0 0x0 igama lenkinga kudivayisi yakho enikeza imininingwane mayelana nokwehluleka okuthile, njengesizathu saleli phutha, isistimu engasebenzi kahle, nokunye. Kungenzeka ukuthi uzothola lesi siphazamisi ezindaweni ezahlukahlukene kudivayisi yakho. Uma ungumuntu wezobuchwepheshe ungakwazi ukuyixazulula kalula le nkinga kodwa uma ungumuntu ongeyena owochwepheshe kufanele uthole usizo kuchwepheshe. Misa ukuvela kwaleli phutha futhi Lungisa Iphutha 0x0 0x0.
Ngaphambi kokwazi indlela yokuyilungisa ake sibheke isizathu saleli phutha.
Imbangela Yephutha 0x0 0x0
Ungakhathazeki uma leli phutha livela kungazelelwe kudivayisi yakho. Uma ubona lo mlayezo ezikrinini zakho bese uthatha ngokuthi isistimu yakho iphukile futhi idinga ukulungiswa ngokushesha. Leli phutha lingaba umphumela wokufaka noma ukukhipha noma yiluphi uhlelo lokusebenza olungaqedwanga ngendlela efanele.
Ezinye izimbangela ezivamile zaleli phutha ukuvala idivayisi kungazelelwe ngenxa yokunqanyulwa kwamandla noma ukuphelelwa amandla, ungase futhi usole ulwazi lwakho olungelona olobuchwepheshe noma oluncane lobuchwepheshe.
Ulilungisa Kanjani Iphutha 0x0 0x0
Uma kunguwe osebenzisa amadivaysi/i-PC yesimanjemanje ungakwazi ukuxazulula inkinga ngokwenza usebenzisa ikhodi etholakala lapho. Noma ungase ucabange ukuthola usizo lobuchwepheshe ukuze ulungise Iphutha 0x0 0x0.
Nazi izinto ezimbalwa ongazenza uwedwa:
Dlula kuhlelo lwakho lokusebenza lokulungisa ikhompuyutha.
Izinhlelo zokusebenza zokulungisa amakhompyutha kufanele zifakwe futhi ziqaliswe ngendlela efanele.
Ukuze uthole inkinga uma kukhona ukuchofoza okuskena manje.
Manje udinga ukulungisa zonke izinkinga ngokuchofoza inketho ethi "Lungisa Konke".
Kukhona ezinye izindlela ezimbalwa ezingasetshenziswa ukulungisa Iphutha 0x0 0x0
Thatha iskena esigcwele sekhompuyutha yakho futhi uqinisekise ukuthi unazo zonke izinto ezibuyekeziwe kudivayisi yakho. Lawa magciwane adinga ukususwa ngokushesha ukuze asebenze kahle.
Indlela yesi-2: Qalisa i-Disc Cleanup
Hlola isikhala samahhala kudivayisi yakho. Kwesinye isikhathi isikhala kudivayisi yakho siba yinkinga enkulu. Into engcono kakhulu ongayenza ukuhlanza idatha yakho njalo futhi uyigcine kusigcinalwazi sakho. Uma udinga iphutha lokulungisa ngokushesha 0x0 0x0 bese uzama ukuqala kabusha ikhompuyutha yakho.
Ungakwazi futhi ukuvula iwindi lakho lokuhlola bese uchofoza uhla lwemibhalo ukuze uvule i-Disk Cleanup. Ungaphinde ukuthole kumenyu Yezakhiwo.
Ukudla okudlela endlini
Kulesi sihloko, ufunde mayelana nencazelo yephutha 0x0 0x0 nezindlela zokulungisa Iphutha 0x0 0x0 futhi uthole nezizathu zaleli phutha. Siyethemba ukuthi ngokuzayo noma nini lapho ubhekana nalolu daba ulwazi lwethu luzoba khona ukuze lukusize.
I-FAQ : -
Ngililungisa kanjani iphutha elingu-0x0?
Ukonakala kwefayela, ukulahleka, noma ukususwa kwekhodi Yephutha Lokufaka I-Windows Amafayela 0X0 kungaholela ekutheni Amaphutha e-Windows Installer. Ngokuvamile, ukufaka inguqulo entsha yefayela le-Microsoft Corporation kuzolungisa inkinga edala iphutha.
Inkinga : uphume ngekhodi 0 (0x0)
Beka a try/catch vimba ikhodi bese uyiqhuba ngaphansi kwe-debugger. Kuncane esingakwenza lapha ngaphandle kokukwazi ukubona ikhodi yakho, futhi ngaphandle kwalokho, bekufanele ngabe uyisebenzise ngaphansi kwesilungisi nkinga NGAPHAMBI kokuthi usicele ukuthi sikhombe inkinga yakho.
Ngilungisa kanjani 'ukuphuma ngekhodi yephutha 0'
Lokho "phuma ngo ..." umugqa akuyona ingxenye yekhodi yakho. Okwenziwa yikhodi yakho, ukuphrinta okuthi "Hello World!" nokuphuma. Okunye okubonayo, kokubili ulayini "ophume nge ..." kanye "Cindezela noma yimuphi ukhiye ...", kuyingxenye "ye-Visual Studio Debug Console", okubonakala sengathi uyisebenzisela ukusebenzisa uhlelo lwakho, ngokusekelwe kusithombe-skrini sakho. Ivele iphrinte ukuthi inqubo iphume ngekhodi yephutha 0 (0 okusho ukuthi "akukho phutha") njengolwazi lokususa iphutha.
Uma ubungavula uhlelo lwakho ngokuvula i-Windows Explorer, iya kufolda equkethe uhlelo lwakho, bese uchofoza kabili kuyo ukuze uluqalise, uzobona lokhu: uhlelo oluphrinta "Sawubona Mhlaba!" futhi ngokushesha ephuma.
Ithini ikhodi yephutha 0x80070422?
Ubona ikhodi yephutha elandelayo uma uzama ukufaka igeyimu ye-Xbox Game Pass kuwe Windows 10 I-PC: 0x80070422. Lokhu kusho ukuthi Isitolo seMicrosoft asisebenzi kweyakho Windows 10 I-PC ngoba i-Windows Update ivaliwe ku-PC yakho.
Iyini ikhodi yephutha 80072efe?
Ikhodi yephutha 80072efe ikhombisa: Uxhumo neseva lunqanyulwe ngendlela engavamile. Sicela uqiniseke ukuthi ayikho imithetho ye-firewall noma ummeleli wokuvimba ama-URL okulanda e-Microsoft.
0x0 0x0, iphutha0x0, yini 0x0
I-NNFTS Ifomu Eligcwele - Liyini Ifomu Eligcwele le-NNFTS?
I-Isaimini Moviesda 2021: I-Tamil Movies Download, Tamil Dubbed Movies, Moviesda.com, Moviesda.in, Isamini.com, Isamini.in